Ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na ndị na - eweta ya - China wepụ ihe nrụpụta ụlọ ọrụ - Nkebi nke 2
Tetrandrine bụ ụdị dibenzylisoquinoline alkaloid. Ọ bụ dimer nke abụọ benzylisoquinoline mebere site na agbụ ether abụọ jikọtara isi na isi na ọdụ n'otu n'otu. Tetrandrine fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanye na mmiri, mmanụ ether, ether na ụfọdụ ihe ndị na-emepụta ihe.
Agaricus blazei (aka Brazil ero), nwa afọ na Brazil na Peru, Mkpụrụ ya na-atọ ụtọ nke ọma na ọ bụ ụdị ero na-eri nwere nnukwu ọdịnaya nke protein na shuga. [isi mmalite nke ngwaahịa] A na - ewepụta ya site na mma Agaricus blazei fruitbody.
Baicalin sitere na Scutellaria mgbọrọgwụ wepụ ogige ndị dịpụrụ adịpụ a na-akpọ flavonoids. O nwere ihe omumu banyere ndu, nwere antibacterial, diuretic, mgbochi mkpali, mgbochi metamorphosis, na antispasmodic utịp, ma nwee ike igbochi kansa cancer na mmeghachi omume nke aru. Ọ bụrụla ihe dị mkpa
Garcinia cambogia, nke sitere na India ya bu nkpuru osisi ohia nke a makwaara dika Malabar tamarind, bu ihe eji eme ka ihe di ike. Ndị mmadụ na-ekwu na ọ na - egbochi ahụ gị ịme abụba yana ọ na - etinye brekị na agụụ gị. Ọ nwere ike inye aka mee ka shuga shuga na ọkwa cholesterol lelee, kwa.
Gotu Kola (Centella asiatica), ahịhịa na-adị kwa afọ nke si na mpaghara okpomọkụ, ka ejiriwo ọgwụgwọ ọtụtụ ọnọdụ kemgbe ọtụtụ puku afọ na China. na-emeso ọnọdụ anụ ahụ, melite nghọta doro anya, ma na-emeso va
[Aha aha] Epimedium [ndụ ndụ] ọnwa 24 [aha nkịtị] Epimedium wepụ [osisi synonym] Epimedium [ihe na-arụsi ọrụ ike] Icariin
Curcumin Powder Wepụ Curcumin 98% hplc
Sucralose bụ ntụ ntụ na-acha ọcha, nke na-abụghị nke caloric, nke na-atọ ụtọ dị ukwuu nke emere site na shuga, oge 600 -650 dị ụtọ karịa shuga. A kwadoro Sucralose maka iji nri na ihe ọ byụveraụ nke FAO / WHO karịrị mba 40 gụnyere Canada, Australia na China.
Ogologo ogo (DIM) Diindolylmethane ọgwụ intermediates
Kaempferol bụ antioxidant siri ike ma na-enyere aka igbochi mmebi nke oxyidative nke mkpụrụ ndụ anyị, lipids na DNA.
<< <Gara aga 123 Osote> >> Peeji 2/3